उल्का के हो: विशेषताहरु, गठन र प्रकार | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 01/09/2021 17:39 | खगोल विज्ञान
उल्कापिण्डहरु सधैं फिल्महरुमा देखीएको छ जब हाम्रो ग्रह मा खस्दै। त्यहाँ हाम्रो पारिस्थितिकी तंत्र मा एक उल्का को प्रभाव को कारण डायनासोर को विलुप्त होने को बारे मा धेरै कुरा भएको छ। जे होस्, त्यहाँ धेरै मानिसहरु छन् जो राम्ररी जान्दैनन् उल्का के हो? प्राविधिक र यसको अस्तित्व के मतलब छ।
तेसैले, हामी यो लेख समर्पित गर्न को लागी तपाइँ तपाइँलाई उल्कापिण्ड के हो, यसको विशेषताहरु र प्रकारहरु को बारे मा जान्न को लागी सबै कुरा बताउन को लागी भन्न को लागी।
1 उल्का के हो?
3 उल्कापिण्डको गठन
4 उल्कापिण्डका प्रकारहरु
5 क्षुद्रग्रह संग फरक
उल्कापिण्डहरु को परिभाषा एक आकाशीय पिण्ड को एक टुक्रा को रूप मा भन्न सकिन्छ कि ग्रह पृथ्वी वा कुनै अन्य तारा मा खस्छ। यसको मतलब यो छ कि चट्टानी शरीर एक तारा को सतह सम्म पुग्न को लागी प्रकाश को एक उज्ज्वल ट्रेल पछाडि छोड्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ कि हामी एक उल्का कल गर्छौं।
तसर्थ, उल्कापिण्ड मात्र पृथ्वीमा खस्न सक्दैन, तर कुनै पनि अन्य तारा सम्म पुग्न सक्छ: मंगल, शुक्र, चन्द्रमा को सतह, आदि
पृथ्वी को लागी, यो यसको प्राकृतिक बाधा छ यो घटना को प्रतिरोध गर्न को लागी: वातावरण। ग्याँस को यो तहले अन्तरप्लानेटरी सामग्री को धेरै जसो वायुमण्डलमा पुग्न को लागी यो सतह मा हिर्काउनु भन्दा पहिले कारण हुन सक्छ।। ठूला उल्कापिण्डहरु साना टुक्राहरुमा टुक्रिन्छन्, जसमध्ये केहि भुइँमा पुग्न सक्छ।
जब उनीहरु पास हुन्छन्, उनीहरु उल्का उत्पादन गर्छन् हामीले पहिले उल्लेख गरेका छौं। जब यी आगोका गोलाहरु वायुमण्डलमा विस्फोट हुन्छन्, उनीहरुलाई आगोको गोला भनिन्छ। धेरैजसो उल्काहरु अदृश्य वा सूक्ष्म हुन्छन् जब उनीहरु सतह सम्म पुग्छन्। जे होस्, अरुलाई थप अनुसन्धान र विश्लेषण को लागी पाउन सकिन्छ।
उल्कापिण्डहरु अनियमित आकार र विभिन्न रासायनिक संरचनाहरु छन्। चट्टान उल्का धातु उल्का वा धातु चट्टान उल्का (कम से कम पृथ्वी मा प्रभाव मा निर्भर गर्दछ) को तुलना मा अधिक प्रचुर मात्रा मा अनुमान गरिएको छ। धूमकेतु जस्तै, ती मध्ये धेरै सौर्य प्रणाली को गठन बाट सामाग्री, जसले बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान गर्न सक्छ।
उल्कापिण्डहरु सामान्यतया आकार मा केहि सेन्टीमिटर बाट केहि मिटर सम्म हुन्छन्, र सामान्यतया क्रेटर को केन्द्र मा अवस्थित हुन्छन् जब उनीहरु खस्छन्। यही कारणले गर्दा उनीहरु मध्ये धेरै भूगर्भीय पूर्वानुमान को दौरान सयौं वा हजारौं बर्ष पछि खोजिएको थियो।
यो अनुमान गरिएको छ कि विभिन्न आकार र रचनाहरु को लगभग १०० उल्कापिण्डहरु प्रत्येक बर्ष हाम्रो ग्रह को सतह मा प्रवेश, केहि धेरै सानो र अरु व्यास मा एक मीटर भन्दा बढी छन्। धेरैजसो पदार्थहरु जो वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दछन् उनीहरुको तलको मार्गमा घर्षण क्षरण प्रतिरक्षा गर्दैनन्, तर धेरै अन्य पदार्थहरु गर्न सक्छन्। यदि एक साक्षीले भुइँमा यसको प्रभाव देखे, यो एक 'पतन' भनिन्छ, र यदि यो पछि पत्ता लाग्यो, यो एक 'खोज' भनिन्छ।
दर्ता गरीएको छ र लगभग दर्ता गरीएको छ 1.050 पतन र लगभग 31.000 खोजहरु। उल्कापिण्डहरुलाई ठाउँको नाम दिईन्छ जहाँ उनीहरु भेटिएका थिए वा उनीहरुको पतन देखीएको थियो, सामान्यतया संख्या र अक्षरहरुको संयोजन पछि उनिहरुलाई अन्य उल्कापिण्डहरु बाट छुट्याउन को लागी एकै क्षेत्रमा पसे।
उल्कापिण्ड धेरै स्रोतहरु बाट आउन सक्छ। केहि मात्र ठूलो खगोलीय वस्तुहरु (जस्तै उपग्रह वा ग्रहहरु) को गठन (वा विनाश) बाट अवशेष हुन्। तिनीहरू पनि क्षुद्रग्रह को टुक्राहरु हुन सक्छन्, जस्तै ती जो भित्री ग्रहहरु र बाहिरी ग्रहहरु को बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट मा प्रशस्त छन् हाम्रो सौर्य प्रणाली को।
अन्य मामिलाहरुमा, उनीहरु धूमकेतु बाट बिछोडिएका छन्, उनीहरुको वेक मा साना टुक्राहरु गुमाएर। यी उत्पत्तिहरु मध्ये एक कब्जा पछि, उनीहरु अझै तैरिरहेका छन् वा विस्फोट वा अन्य समान घटना को कारण उच्च गति मा अन्तरिक्षमा फ्याँकिन्छन्।
उल्कापिण्डहरु को उत्पत्ति, रचना वा दीर्घायु को आधार मा, उनीहरु बिभिन्न प्रकारहरुमा वर्गीकृत छन्। आउनुहोस् यी सबै मापदण्डहरु अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्गीकरण के हो हेरौं:
आदिम उल्कापिण्डहरु: यी उल्कापिण्डहरु लाई chondrites पनि भनिन्छ र सौर्यमण्डलको गठन बाट आउँछ। तसर्थ, ती विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाहरु द्वारा परिवर्तन हुनेछैनन् र लगभग ४.५ अरब बर्ष को लागी अपरिवर्तित रहनेछन्।
Carbonaceous chondrite: यो मानिन्छ कि उनीहरु सूर्य बाट टाढा कोन्ड्राइट हुन्। यसको संरचना मा हामी 5% कार्बन र 20% पानी वा विभिन्न जैविक यौगिकहरु पाउन सक्छौं।
साधारण chondrites: ती सबै भन्दा साधारण chondrites कि पृथ्वी सम्म पुग्छन्। तिनीहरू सामान्यतया साना क्षुद्रग्रहहरु बाट आउँछन्, र फलाम र सिलिकेट आफ्नो संरचना मा मनाइन्छ।
Chondrite enstatites: तिनीहरू धेरै प्रचुर मात्रामा छैनन्, तर तिनीहरूको संरचना मात्र हाम्रो ग्रह को मूल गठन को समान एक हो। यसैले, वैज्ञानिकहरु लाई विश्वास छ कि तिनीहरुको एकत्रीकरण हाम्रो ग्रह को गठन को लागी नेतृत्व गर्दछ।
पिघलेको उल्कापिण्ड: उल्का यस प्रकार को यसको मूल को मुख्य शरीर को आंशिक वा पूर्ण फ्यूजन को परिणाम हो, र भित्र एक कायापलट प्रक्रिया गुज्रन्छ।
Achondrites: तिनीहरू आग्नेय चट्टान हुन् जुन सौर्यमण्डलमा अन्य आकाशीय पिण्डहरु बाट उत्पन्न भएको हो। यस कारण को लागी, तिनीहरुको नाम तिनीहरुको मूल संग सम्बन्धित छ, यद्यपि उनीहरु मध्ये धेरै जसो एक अनिर्धारित मूल छ।
धातु: यसको संरचना 90 ०% भन्दा बढी धातुहरु मा आधारित छ, र यसको उत्पत्ति एक ठूलो क्षुद्रग्रह को नाभिक हो, एक ठूलो प्रभाव बाट निकालेको।
धातुहरु: यसको संरचना धातु र सिलिकन बराबर छ। तिनीहरू ठूला क्षुद्रग्रहहरु भित्र बाट आउँछन्।
क्षुद्रग्रह संग फरक
केहि अवस्थामा, उल्का र क्षुद्रग्रह शब्दहरु एक अर्का को उपयोग गरीन्छ। जे होस्, यो बिल्कुल सही छैन, त्यहाँ दुई अवधारणाहरु को बीच धेरै मतभेद छन्।
क्षुद्रग्रह ती चट्टानी खगोलीय पिण्डहरु हुन् जसले सूर्य र नेप्च्यूनको परिक्रमा गर्छन्, सामान्यतया मंगल र बृहस्पति को बीच दोलन। उल्का यो क्षुद्रग्रह को एक सानो कण हो कि वायुमण्डलमा विघटित हुन सक्छ र पृथ्वी को सतह सम्म पुग्न सक्छ।
सौर्यमण्डलमा उनीहरुको स्थिति अनुसार, यदि उनीहरु मंगल र बृहस्पति को बीचमा परिक्रमा गर्छन्, उनीहरुलाई क्षुद्रग्रह बेल्ट को रूप मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, यदि उनीहरु पृथ्वी को नजिकै परिक्रमा गर्छन्, उनीहरु एनईए वा क्षुद्रग्रह को रूप मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, यदि उनीहरु कक्षामा छन्। बृहस्पति को। , ट्रोजन को हो, यदि उनीहरु पृथ्वीको आफ्नै सौर्य प्रणाली बाहिर वा कक्षा मा एउटै क्षुद्रग्रहहरु मा स्थित छन्, किनकि उनीहरु पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा गरीएको छ।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाइँ एक उल्कापिण्ड के हो र यसको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » उल्का के हो?
वर्षा बम, भाइरल मौसम विज्ञान घटना